इटालियन सॉसेज Cook different बिभिन्न तरिकाहरू कसरी पकाउने! - व्यंजनहरु
तपाईं spaghetti को लागी marinara सॉस को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ?
तपाईं कालो माछा कसरी पकाउनुहुन्छ
१ कप पकाएको चामलको कति कपहरू
म कहाँ कर्नीश कुखुरा किन्न सक्छु
इटालियन सॉसेज कसरी पकाउने
हार्दिक स्वाद र शुद्ध सान्त्वना को लागी, केहि पनि पक्का छैन इटालियन सॉसेज । स्टोभटपमा, भट्टीमा वा ग्रिलमा इटालियन सॉसेज कसरी पकाउने भनेर म तपाईंलाई देखाउने छु त्यसैले यो क्रिस्पी ब्राउन र रसीला हरेक पटक हुन्छ।
इटालियन सॉसेज यति धेरै शानदार रेसिपीहरूमा फिट हुन्छ सॉसेज र खुर्सानी , सॉसेज र पास्ता, वा टिसेको साथ सॉसेज होगीहरू caramelized प्याज । Minestrone सूप इटालियन सॉसेजको साथ राउन्डमा काट्नु व्यावहारिक रूपमा यसको सबै भोज हो। र यो सबै सम्भव छ सॉसेजको उचित तयारी द्वारा।
इटालियन सॉसेज के हो?
इटालेली सॉसेज season इन्च लम्बाई लिंकहरू उत्पादन गर्न क्यासिंग शेलहरूमा भरिएका मौसमी सुँगुरको मासुबाट बनेको हुन्छ। सामान्यतया यो सौंफ बीउ र रातो मिर्च फ्लेक्सको साथ बनेको हुन्छ। त्यो संयोजनले इटालियन सॉसेजलाई यसको विशिष्ट स्वाद र चरित्र दिन्छ।
धूम्रपान गरिएको सॉसेज जस्तो नभई, इटालेली सॉसेज १ 160० ° एफ मा पकाउनु पर्छ किनकि यो कच्चा जमिन सुँगुर उत्पादन हो।
खाना पकाउने सॉसेज ज्यादै उच्च, धेरै छिटो र असमान रूपमा लि links्कहरू बाहिरबाट धेरै अँध्यारो हुन सक्छ र अझै केन्द्रमा वा कच्चामा कच्चा हुन्छ र विभाजन गर्न र विभाजित हुन सक्छ।
बिस्तारै तिनीहरूलाई तातोमा ल्याउँदै, र ब्राउनिंगको लागि पनि बदल्नुहोस् उत्तम सॉसेजको लागि अनुमति दिनेछ। तिनीहरूलाई कर्लिंगबाट बच्नको लागि तपाइँ उनीहरूलाई लम्बाइका दिशामा वा बारबेक्यू क्ल्याम्पमा राख्न सक्नुहुनेछ।
long 350० मा काटिएको आलु बनाउन कति लामो समय सम्म
के तपाईले छाला छेड्नु पर्छ?
होईन, कृपया गर्नुहुन्न! यो एक सामान्य टिप हो जुन धेरै रेसिपीहरूमा देखा पर्दछ तर यो उपयुक्त छैन।
दुर्भाग्यवस, यसले ती सबै राम्रा रसहरू पनि उम्कने छ, एक अभेद्य झिल्लीमा मासु समेट्ने सम्पूर्ण उद्देश्यलाई हराउन को क्रममा पराजित गर्न।
नोट: खाना पकाउने समयहरू सॉसेजको मोटाईमा आधारित हुन्छन्।
लि links्कहरू पानीमा स्किलेटमा राख्नुहोस्।
बिस्तारै बिस्तारै ल्याउनुहोस्, कभर गर्नुहोस् र १०-१२ मिनेटसम्म कभर गर्नुहोस्
उजागर, पानी बाफ बनाउन र खाना पनी जारी गर्न अनुमति दिनुहोस्, ब्राउन नभएसम्म लगातार।
केक सजावटको लागि चकलेट कर्लहरू कसरी बनाउने
Foil-lined बेकिंग पानामा लिंकहरू राख्नुहोस्।
चिसो ओभनमा राख्नुहोस् र ताप 350 350० डिग्री फारेनहाल्नुहोस्
२-3--35 मिनेटसम्म वा आन्तरिक तापक्रम १ 160० ° एफ रेजिस्टर नगरेसम्म पकाउनुहोस्।
एक5375 ° एफ ग्रिलमा राख्नुहोस् र ढकनी बन्द गर्नुहोस्।
प्रत्येक १ brown देखि २० मिनेट जति ब्राउन नभएसम्म वा पोर्क १ .० ° एफ सम्म नपुगुञ्जेल प्रत्येक घुम्नुहोस्।
थप स्वादिष्ट सासेज रेसिपीहरू
सॉसेज र खुर्सानी - कम कार्ब
मलाईदार सॉसेज र बन्दकोबी सूप - आराम स्वर्ग स्वर्ग
स्टोभ शीर्ष3पनीर पास्ता सॉसेजको साथ - मेरो मन पर्ने
भुनी टमाटर सॉसको साथ इटालियन सॉसेज भाषाई - एक महान मिति रातको खाना
गोभी र सॉसेज फोइल प्याकेटहरू - बच्चा अनुमोदित
तयारी समय। मिनेट कुक समयपन्ध्र मिनेट सर्भिंगहरू। सर्विंग्स लेखकहोली निल्सन यस विधिले तपाईंलाई इटालियन सॉसेज कसरी पकाउने देखाउँदछ। स्टोभ माथि, ओभन वा ग्रिलमा पकाए पनि, यी ससेज लिंकहरू प्रत्येक पटक उत्तम बाहिर जान्छन्! प्रिन्ट गर्नुहोस् पिन
▢। इटालियन सॉसेज लिंकहरू वा धेरै जसो चाहानुहुन्छ
ठूलो स्किलेटमा सॉसेज राख्नुहोस्।
पानीको गहिराइमा थप्नुहोस्। एक सिमर र आवरण मा ल्याउनुहोस्।
१२ मिनेट को लागी उकालो। ढक्कन हटाउनुहोस् र पानी वाष्पीकरण गर्नुहोस् जब सम्म सॉसेज कहिलेकाँही खैरोमा परिवर्तन हुन्छ।
Foil-lined बेकिंग पानामा लिंकहरू राख्नुहोस्। चिसो ओभनमा राख्नुहोस् र ताप 350 350० डिग्री फारेनहाल्नुहोस्।
२-3--35 मिनेट पकाउनुहोस् वा आन्तरिक तापक्रम १°० ° एफ रेजिस्टर नभएसम्म।
एक5375 ° एफ ग्रिलमा राख्नुहोस्। ढकनी बन्द गर्नुहोस्।
क्यालोरिज:8 388,कार्बोहाइड्रेट:१g,प्रोटिन:१g,मोटो:35g,पागलिएको बोसो:१g,कोलेस्ट्रॉल:85मिलीग्राम,सोडियम:819मिलीग्राम,पोटासियम:२33मिलीग्राम,भिटामिन सी:दुईमिलीग्राम,क्यालसियम:बीसमिलीग्राम,फलाम:१मिलीग्राम
कीवर्डइटालियन सॉसेज कोर्समुख्य मार्ग पकाइयोअमेरिकी, इटालियन© SpendWithPennies.com। सामग्री र फोटोग्राफहरू प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित छन्। यस नुस्खाको साझेदारीलाई दुवै प्रोत्साहन र सराहना गरिन्छ। कुनै पनि सामाजिक मिडियामा पूर्ण रेसिपीहरू प्रतिलिपि गर्न र / वा टाँस्न कडा निषेधित छ। कृपया यहाँ मेरो फोटो प्रयोग नीति हेर्नुहोस् ।